Njikwa Ogo - Chengdu Zhengxi Hydraulic Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Iwu Ogo, Mgbaru Ọsọ, Nkwa
Ahịa mbụ; mma mbụ; njikwa usoro nchịkwa siri ike; na-eke akara izizi.
Onu ogugu ndi ahia ruru 100%; oge nnyefe oge ruru 100%; a na-edozi echiche ndị ahịa ma nyeghachi ya 100%.
Production Onodi Otu
1. Quality usoro: Iji na-achịkwa nke ọma ihe na-emetụta ngwaahịa teknụzụ, njikwa na ndị ọrụ iji gbochie ma kpochapụ ngwaahịa na-erughị eru, ụlọ ọrụ ahụ etolitela usoro sistemụ dị mma na usoro ahaziri ahazi, ma mejuputa ya iji hụ na mmesi obi ike nke usoro ahụ na-aga n'ihu .
2. Nhazi njikwa: iji hụ na e mepụtara atụmatụ na mmepe ngwaahịa ahụ dịka usoro njikwa usoro iji hụ na ngwaahịa ahụ dabara ụkpụrụ mba dị mkpa yana ihe ndị ọrụ chọrọ.
3. Njikwa akwụkwọ na ihe ndị ọzọ: Iji nọgide na-ezu ezu, ziri ezi, ịdị n'otu na ịdị irè nke niile metụtara akwụkwọ na ihe onwunwe nke ụlọ ọrụ ahụ, na igbochi iji akwụkwọ ndị na-abaghị uru ma ọ bụ nke na-abaghị uru, ụlọ ọrụ ahụ na-achịkwa akwụkwọ na ihe.
4. singzụta:Iji mezuo ihe ndị dị mkpa nke ngwaahịa ikpeazụ nke ụlọ ọrụ ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-achịkwa ị nweta ihe ọkụkụ na inyeaka na akụkụ ndị ọzọ. Nchịkwa siri ike na usoro nnabata na usoro ị nweta ngwaahịa.
5. Product njirimara:Iji gbochie akụrụngwa na inyeaka ihe ndị a na-enyeghị, akụkụ ndị a na-apụ apụ, ngwaahịa ndị e mechara emecha na ngwaahịa agwakọtara na ngwakọta na mgbasa, ụlọ ọrụ ahụ ekwupụtala ụzọ akara ngwaahịa. Mgbe akọwapụtara ihe achọpụtara, a ga-amata ngwaahịa ọ bụla ma ọ bụ nke ngwaahịa ọ bụla.
6. Usoro njikwa: Companylọ ọrụ ahụ na-achịkwa usoro ọ bụla na-emetụta ogo ngwaahịa na usoro mmepụta iji hụ na ngwaahịa ikpeazụ ga-emezu ihe achọrọ.
7. Nnyocha na ule: Iji nyochaa ma ihe dịgasị iche iche na usoro mmepụta ahụ chọrọ ihe achọrọ, achọrọ nyocha na ule achọrọ, na ndekọ ga-edebe.
A. inspectionzụta nyocha na ule
B. Nyocha nyocha na nyocha
C. Nyocha na ule ikpeazụ
8. Njikwa nnyocha, mmesho na ule akụrụngwa: Iji hụ na nyocha nke nyocha na mmụba na ntụkwasị obi nke uru ahụ, wee mezuo ihe achọrọ maka mmepụta, ụlọ ọrụ ahụ kwuru na a ga-achịkwa nyocha, nyocha na akụrụngwa nyocha dị ka usoro iwu si dị.
Onodi Production 2 (Nnukwu Lathe)
1. Njikwa ngwaahịa na-erughị eru: Iji gbochie ntọhapụ, ojiji na nnyefe nke ngwaahịa na-erughị eru, ụlọ ọrụ ahụ nwere ụkpụrụ iwu siri ike na njikwa, iche na njikwa nke ngwaahịa na-erughị eru.
2. Ndozi na mgbochi: Iji kpochapụ ihe ndị nwere ike ime ma ọ bụ ihe ndị na-erughị eru, ụlọ ọrụ ahụ edozila usoro mmezi na mgbochi.
3. ationgbọ njem, nchekwa, nkwakọ ngwaahịa, nchebe na nnyefe: Iji hụ na ogo nke ndị mba ọzọ ịzụrụ na okokụre ngwaahịa, ụlọ ọrụ emewo formular nlezianya na atichazi akwụkwọ maka njikwa, nchekwa, nkwakọ, nchebe na nnyefe, na nditịm-achịkwa ha.